Real Madrid oo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka La Liga kaddib markii ay garaacday Real Sociedad… +SAWIRRO – Gool FM
(San Sebastián) 04 Dis 2021. Real Madrid ayaa sii dheereysatay hoggaanka La Liga, kaddib markii ay kaga soo adkaatay kooxda Real Sociedad oo ay ku booqatay garoonka Reale Arena 0-2, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Spain.
1-0 kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Real Sociedad iyo Real Madrid ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 47-aad Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay da’ayarkooda reer Brazil ee Vinícius Júnior waxaana ka caawiyay Luka Jović.
57 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Luka Jović oo caawin ka helay ma daalaha Los Blancos ee Casemiro ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Real Madrid.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay 0-2 ay kaga soo adkaatay Real Madrid kooxda Real Sociedad oo ay ku booqatay garoonka Reale Arena, Los Blancos ayaa kaddib guushan ay gaartay waxay ku hoggaamineysaa horyaalka La Liga 39 dhibcood.
Horudhac: Manchester United vs Crystal Palace... (Ralf Rangnick oo kulankiisa ugu horreeya leylin doona Red Devils & Palace oo guul ka heysata Old Trafford labadii booqasho ee ugu dambeysay)